गाग्रो छोएको निहुँमा मरणासन्न हुनेगरि कुटपिट, अपराधी जोगाउन आर्थिक प्रलोभन ! | Diyopost
गाग्रो छोएको निहुँमा मरणासन्न हुनेगरि कुटपिट, अपराधी जोगाउन आर्थिक प्रलोभन !
दैलेख । नेपालको संबिधानले जातीय बिभेदलाई गैरकानुनी मानेको छ । तर, कानुनी रुपमा अपराध मानिएको जातीय बिभेद तथा छुवाछुतका घटना दिनहुँ हुँदा पनि सरकार बेखवर जस्तै बनेको छ । पछिल्लो पटक दैलेखमा धारामा गाग्रो छोएको निहुँमा एक दलित महिला कुटिएकी छिन् । नारायण नगरपालिका, १० भवानीकि ३५ वर्षीया लछिमा सुनारलाई धारामा गाग्रो छोएको भन्दै स्थानीय राजकुमारी न्यौपानेले निर्धातरुपमा कुटपिट गरेकी थिइन् ।
यो घटना गत बैशाख ११ गते भएको थियो । तर, अहिलेसम्म आरोपित न्यौपानेलाई कुनै कारवाही नभएको पीडितको गुनासो छ । पीडत सुनारले आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । मुद्धा दर्ता गराए पनि प्रहरीले अपराधीलाई पक्राउ नगरेको पीडितको आरोप छ । यता, आरोपित राजकुमारी न्यौपाने फरार भनिएको कारण पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरीको भनाई छ ।
आरोपीलाई पक्राउ गरि कानुनी कार्वाही गर्नुको साटो राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरु घटनालाई मिलापत्रमा टुङ्ग्याउनका लागि यतीबेला छलफमा जुटेका छन् । नारायण नगरपालिकाका वडाध्यक्ष लोकबहादुर थापाले भने आफुहरुले मिलापत्रको लागि दवाब नदिएको बताएका छन् । दियोपोस्टसंगको कुराकानीमा वडाध्यक्ष थापाले पीडितहरु नै मिल्न खोजेको बताए । ‘घटनालाई दुबै पक्षमार्फत खुकुलो बनाउने प्रयास भएको छ’उनले भने । तर, पीडितलाई आर्थिक लोभमा पारेर घटनालाई सामसुम पार्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ । यो विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा वडाध्यक्ष थापाले मिलापत्र गर्न नखोजिएको तर पीडितलाई कसरी क्षतिपुर्ती प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘पीडितले न्याय र पीडकले प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही भोग्नुपर्छ ।’
पिडकको खोजिका लागि दवाब दिनेभन्दा पीडितलाई क्षतिपुर्ती दिएर छुवाछुत जस्तो संवेदनशील अपराधलाई लुकाउने प्रयास देखिएको स्थानीयको भनाई छ । संविधान अनुसार कुनैपनि स्थानमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत जन्य क्रियाकलाप गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
राज्यको कानुन विपरितको कार्य गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कार्वाही हुनु पर्नेमा घटनालाई मिलापत्रमा टुङ्ग्याउन खोज्नु अपराधीलाई प्रोत्साहन भएको भन्दै यसको चौतर्फी बिरोध गरिएको छ ।
गाग्रो छोएको निहुँमा कुटपीट प्रकरणः चलखेल गरेर अपराधी बचाउनतर्फ नलाग्न जनप्रतिनिधिलाई सांसदको चेतावनी
मेगा बैंक २ करोड ९ लाख ठगी प्रकरण : सिइओ अनुपमा खुँजेली नै समलग्न भएको खुलाशा !
यी हुन् बच्चा बोकेकी महिलामाथि लाठी बर्साउने प्रहरी इन्सपेक्टर !
अनमोल केसी बिरुद्ध प्रहरीमा उजुरी, ५ लाख ठगी गरेको आरोप
विश्व शेयर बजारमा संकट, कोरानाभाइरसको कारण आर्थिक मन्दी देखिने डर
कोरोनाभाइरसको कारण इरानी राष्ट्रिय फुटसल खेलाडी एलहाम शेखीको मृत्यु
कोरोनाभाइरसबाट बँच्न संवेदनशील बनौँः मुख्यमन्त्री पौडेल